Ukuthatha isigqibo kwiMephuServer-iGeofumadas
cadastreGeospatial - GISGIS asiboniseMicrostation-Bentleyqgis
Ukuthatha incoko yakutshanje neziko laseCadastre elalikhangela indlela yokupapasha iimephu zalo, apha ndishwankathela ezona zinto zibalulekileyo ukubuyisela ukuhlangulwa kwesihloko kuluntu. Mhlawumbi ngelo xesha iya kunceda umntu ofuna ukwenza isigqibo okanye acele uncedo lwe-geofumado.
Kutheni ufuna iMephuServer
Isi simo kwakukho umntu, owayezimisele ukuhamba nge-GeoWeb Publisher, uBentley, kuba wayesenayo ilayisenisi I-Server Discovery, ukhokho walo, ubuyele emdeni. Esinye isizathu sokuba iBentley inomdla kukuba imephu yabo i-Microstation Geographics, kunye nezicelo ze-VBA zokwakhiwa nokugcinwa kweemephu ze-cadastral.
Ngaphambili kwi bhulogi (I-Ugly - Ininzi njengoko umhlobo uthi) wabonisa indlela yokwenza inkonzo yemephu yewebhu, se benzisa I-GIS, njengeendleko eziphantsi ezizezinye. Ndaye ndathetha ngenye imini ngezibonelelo ze Geoweb Umshicileli ukusuka eBentley njengesisombululo xa kukho isilivere eninzi. Oku ukunika ukuqhubeka kweso sithuba sikudala apho Nda ndi the lekisa phakathi kwezicelo ezahlukahlukeneyo zokushicilela imephu ye-intanethi.
Emva kwencoko sithathe isigqibo sokuya kwiMapServer, isihloko endinethemba lokusixhaphaza kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Ngendlela, qalisa ukuvavanya amanye amaqonga emithombo evulekileyo unyaka wonke, kodwa kwindawo yewebhu.
ImephuServer ayisosicelo se-GIS, ayizenzi nokuba ikho, njengoko iphepha layo lisitsho. Yazalwa njengenyathelo leYunivesithi yaseMinnesota, yiyo loo nto logo yayo ivela kwindibano yemilambo iMinnesota neMississippi. Namhlanje ngumgangatho kwinkonzo yemephu yewebhu esasazwa ngokubanzi, mhlawumbi ngenxa yemvelaphi yayo yeAnglo-Saxon. Njengoko esi sicelo kukho uluhlu olubanzi -kakhulu kunene- Ndiyathanda ukulula kwayo, kulula kubasebenzisi abatsha; yonke imilingo ekusingatheni iifayile .map ezingenziwa kwiiprogram ezifana neQGis okanye ukuqonda ingcamango ukuze ilandelelanise iilwimi ezifana ne-PHP, Java, Perl, Python, Ruby okanye C #.
Ezinye izicelo zenziwa kwiMaphuServer "kukhonza”Njengo Chamaleon, Cartoweb, Ka-map kunye noPmapper. Oku kuyacetyiswa kubasebenzisi abanekhowudi encinci, nangona ukuqonda ukuqonda kwasekuqaleni kweMapServer kufanelekile.
Umzekelo obonisiweyo kukuba, ngumzekelo nje womsebenzi esiwenzayo ngoku. Ngemvume yabo kwaye besazi ukuba le nkonzo iya kufumaneka eluntwini kwiiveki ezimbalwa kwaye bayayibona isebenza.
Ezinye izicelo zewebhu zikhona
Ngenxa yolu, ndiya kusebenzisa iSiseko njengendlela yokubhekisela OSGeo, Elinye lawona manyathelo okudala ngokubhekisele kuzinzo kunye nokubekwa emgangathweni komthombo ovulekileyo kwicandelo le-geospatial. Nangona ndivuma ukuba bakhona abanye.
Ummeli weMaphu, eya kufika ekupheleni kwayo kwinguqulo 1.5 kwaye idityaniswe kwiiLayile eziVulekileyo. Into ye-AJAX… yayibuhle.
Vula iiLala, iyamangalisa ukuba ufuna ukudibanisa neGoogle okanye i-Yahoo Maps okanye ukuphucula i-cache kwi-deployment raster.
Mapguide Opensource, ithandwa kakhulu kubudlelwane bayo ne-AutoDesk. Yomelela ukuyifela, nakweyiphi na incasa oyifunayo.
Isidanga, umsi kakhulu kwimigangatho. Ngezinto ezininzi ezinokubakho eYurophu. Ngenxa yozinzo lwayo kwinkxaso ye-GML, kucetyiswa njengenye indlela engathathi hlangothi yokuphumeza iinkqubo zewebhu kwinyathelo lokuqala. UKUFUNA.
Ezinye izisombululo kwi-incubation ye-OSGeo zi:
I-Geoserver, ubuninzi bayo ubunokuthi uphuhliso malunga neJava. Xa kuninzi kunikezela okufana ne-Open Layers xa udibanisa iGoogle Maps, Google Earth, Yahoo Maps, kuquka ne-ArcGIS.
Geomajas oluquka umxhasi omncinci, idesksi kunye newebhu.
ImephuFish, ngokujoliswe phambili kwiPyton kodwa mhlawumbi enye yeyona nto ingaphantsi (ekhompyutheni).
Ukuhambelana nemigangatho OGC. Mhlawumbi owona mhle, nangona kukho phantse zonke izicelo ezivela kumthombo ovulekile, ubuncinane malunga ne-WMS, i-WFS, i-WCS, i-GML.
I-Web Map Service (OGC: i-WMS) i-1.0.0, i-1.0.7, i-1.1.0 ne-1.1.1
Inkonzo Yomsebenzi Wewebhu (OGC: WFS) 1.0.0, 1.1.0
Inkonzo Yobunxibelelwano bewebhu (OGC: iWCS) 1.0.0, 1.1.0
ULwimi loLwimi lweJografi (OGC: GML) 2.1.2, I-3.1.0 Inqanaba le-0 Profile
IWebhu yeeWebhu zeMeko zoMxholo (OGC: WMC) 1.0.0, 1.1.0
Umgcini weStrans Layer (OGC: SLD) 1.0.0
Ukucoca Inkcazo yokuCwangcisa (OGC: FES) 1.0.0
Inkonzo yokuqwalasela i-OGC: i-SOS) i-1.0.0
Imiba kunye neMilinganiselo (OGC: OM) 1.0.0
SWE Common (OGC: SWE) 1.0.1
Ukuhambisa idatha ngokusebenzisa izikhokelo ze-Open Gis Consortium kuya kwenza ukuba nayiphi na inkqubo inamathele kuyo ngaphandle kwesithintelo. Ukusuka kwi-AutoDesk Civil3D, iArcGIS. Imephu yeBentley, kwi-gvSIG, QGis, njl. Nditsho noGoogle Earth / iimephu nge-wms.
Ukuthelekisa kunye nezicelo endandisebenza nazo ngaphambili (i-GeoWeb Publisher kunye ne-GIS ye-Manifold), iMapServer ibasasaza ngokuba ku sasazwaNgenxa yoko, iphepha lakho linolwazi olwaneleyo, imizekelo ephuhlisiweyo, ungasathethi ke ngabantu abasebenzisayo. Kwimeko ye-GWP kuya kufuneka usebenze kakhulu ngezikhonkwane kwaye into ekhoyo kwi-Manifold ngeSpanish incinci kakhulu-ukushiya nina egeomates ukuze angangeni ekuphikisana-.
El inkxaso yenkcukacha ngummangaliso. Ayililo izulu kodwa likufutshane ngokwaneleyo:
Idatha yeVector okanye yeGeodatabase: Iifayile zeMilo, i-GML, iPostGIS kunye nelinye ilizwe nge-OGR, kubandakanya iDGN.
Idatha yeRaster: i-georeferenced Tif nayo nayiphi na into esiyifunayo nge-GDAL.
Ukususela kwimveliso, unokuvelisa jpg, png, pdf kwaye kunjalo, imilinganiselo ye-OGC.
Emva koko kukho inkxaso ye-multiplatform. ImephuServer inokubaleka ngaphezulu kwe-IIS, eyenza ukuba ibe yeyobuhlobo kubasebenzisi beWindows / PC. Kwakhona kwi-Apache, enokuthi isebenze kuyo kwiWindows nakwiLinux ngokumangalisayo, kungekuphela nje ukuhambisa idatha kodwa ukuhamba. Kwimeko yeManifol
d, ukushicilela kuphela i-IIS, ukuba uthetha ngabo nge-Apache ixabanisa, nangona kukho abo baye benza iipirouettes. Kwaye kwimeko ye-Bentley, yiWindows kuphela, nkqu nomboniso wewebhu yi-ActiveX eqhuba kuphela kwi-Internet Explorer, ngaphandle kokuba iyatshaywa. IDPR kwi-sublime kwi-cartridge ye-space.
Akufuneki ukuthetha, ayikhathaleli hlawula ilayisenisi. Ilayisensi ene-Manifold Universal iya kuba kwi-600 yeedola, leyo ye-Bentley GWPublisher ye-US $ 10,000 enabasebenzisi abancinci kwaye ukuba ibiyi-GIS Server ye-US $ 15,000 ukuya phezulu.
Ekugqibeleni, ndibona inzuzo enkulu phuhliso. Ukufumana umntu osebenza kwiMapServer akukho lula kangako, kodwa kulula ngakumbi kunezinye izicelo, nokuba ukude njengoko sisenza ngoku. Umphuhlisi owaziyo amathumbu eBentley GWPublisher akukho lula ukuyifumana, kufuneka azi iProjekthi Wise, Geographics, Microstation VBA kunye neBentley Imephu ukuthatha ithuba lophuhliso olomeleleyo kwi-Bentley Geospatial Server (Nangona ndivuma ukuba kukho izinto ezintle ezenziwe apho). Umphuhlisi we-GIS oManinzi, kunzima kakhulu nangona kuphela .I-NET, kwaye enye evela kwi-GIS Server, ngokuqinisekileyo iya kuhlawulisa ngokuxhomekeke kubungakanani beelayisensi.
Indlela yokuyifaka kwiimpawu ze-5
Azikho amanyathelo amaninzi, kunye nokuqala kweGenesis:
Khuphela i-OSGEO4W kusuka apha
Faka yona, i-Minimal MapServer, i-Apache kunye nomzekelo.
Faka iPache kwaye udale inkonzo (okanye uphakamise i-directory nge IIS).
Qalisa umzekelo kwisiphequluli
Ewe, njengeGenesis, phakathi kwevesi 1 kunye ne-2 kukho izinto ezininzi ezenzekileyo kwimvukelo kaSathana. Ngokubanzi ukufumana inkonzo nge-http: // localhost / okanye kwidabi lakho, kodwa uyafunda.
Kuya kuba ngowolandelayo ukuba siza kuchaza.
AutoDesk Bentley Systems Blog Dgn Umhlaba ka-Google GvSIG OS GIS asibonise mapserver egeomates My
Ngaba siphila kwisikhululo esiphezulu se-robotic?
Iingcebiso: Indlela yokuqala ukubhalwa kwinqaku
Hello Eulises. Ngelinye ilanga uza kusitshela umsi owenziwe nguC #, into encinane ndiyibonile kwiwebhu.
eulises damian cruz gomez uthi:
kutheni ungayenzi ngokucwangcisa i-c kunye ne-sql iseva ye-2008 okanye sele sele uhamba kunye nokushicilela iimephu zendlela yohlobo kwaye uphepha umxholo we-domain kwaye ngoko ufuna nje umncedisi nge asp.net
Naliphi na amava ngomthombo ovulekileyo weMapguide ?? Ndiyifakile ixesha elide, kodwa xa ndiqala inkosi indiphosela kwimpazamo yokunxibelelana neseva ... isifundo esiseSpanish singaluncedo. Ndiyabulisa, enkosi =)
Ukungalungi, kufuneka ulwa ne-Google search engine.
Sawubona, ndinomdla kakhulu kwi-mapserver, ezinye izinto endinayo ithuba lokuzihlanganisa, ngeli xesha ndizinikezele ekuphuhliseni isicelo semephu kwimizila, ngaba unayo ingcamango njani? okanye uncedo lonxibelelwano
Kufuneka ufune inkampani enikezela ukusingatha ngeemaphu zemibala ezibandakanywe kwinkonzo.
Kanye kunye http://www.hostgis.com/
Ukuyisebenzela kwinqanaba le-intranet lilula kakhulu, kuba kuphela nge-IP yomatshini eneenkonzo eziphakanyisiwe (kunye ne-192.168.0.129) inokufikelela kwezinye iikhomputha ngaphakathi kwinethiwekhi efanayo okanye kwiqela elisebenzayo.
Ukuba ufuna ukuyisebenzisa kwi-Intanethi, kufuneka usebenzise umatshini osebenza njengomncedisi ukuze ube noxhumano oluthe xaxa okanye oluncinci lwe-intanethi, kunye ne-IP yoluntu nayo ihlala (80.26.128.194). Isizathu kukuba i-IP esetyenziswayo nezixhobo xa idibanisa kwi-intanethi, enikezelwa yinkonzo ye-intanethi, nangona iyindawo kawonkewonke, iyatshintsha rhoqo xa ifikeleleke kwaye ihlala ihleli, kwaye ngenxa yoko kuyimfuneko ukuhlawula.
Ukuba awufuni ukufikelela kwinombolo ye-IP njengangaphambili, uhlawula idibansi kunye nenkonzo ye-DNS, apho unokufumana idilesi elula http://www.eldominio.com. Ungaphinde uqondise kunye ne-subdomain okanye iinkonzo ezinika amaphepha afana nawo http://www.no-ip.com
Martiño Cabana uthi:
Ndiyakuhalalisela kwiblogi endiyenzile ixesha elide ngoku. Nangona ndiyi-biologist, ndisebenza kwiingxelo ze-GIS. Kunyaka ophelileyo ndafunda ukusebenzisa iMaphuService kancane kwaye kulungile kakhulu. Kodwa ndinemibuzo engayifumananga impendulo. Iyiphi inkampani yokubamba i-MapServer ivenkile? Ziziphi iziphumo kufuneka usebenzise ikhompyutha yakho kwaye usebenzise inethiwekhi yakho ye-intanethi yekhaya?
Ndingathanda ukwenza enye iphrojekthi kunye nale nkqubo kodwa andinayo indlela yokuyixhoma kwinethiwekhi.
Ukuba umntu uyazi impendulo iya kwamkelwa kakuhle.